Milina fanodinana, Machine milina PVC mandeha ho azy - Zhongshuo
Ny CPL dia ampiharina indrindra amin'ny fanesorana ireo lesoka kely ao anaty coil SS mangatsiaka mando, lena, hahazoana ny famaranana haingon-trano, izany hoe No.3, No.4, HL, SB & Duplo. Ny mangatsiaka dia mety ho emulion na menaka mineraly. Ny rafitra filtrika mangatsiatsiaka sy ny fanodikodin-tsakafo dia tena ilaina amin'ny tsipika feno. ZS CPL dia natao ho an'ny coil mihodina mangatsiaka amin'ny fametrahana coil hatramin'ny 100 ka hatramin'ny 1600 mm ary ny hateviny eo anelanelan'ny 0.4 ka hatramin'ny 3.0 mm.
Milina Wuxi Zhongshuo
Ireto ny dingana rehetra amin'ny lalana.
Avy amin'ny fisafidianana sy fanamafisana ny tsara
milina ho an'ny asanao manampy anao hamatsy ara-bola ny fividianana izay mampisy tombony miharihary.
Ny CPL dia ampiharina indrindra amin'ny ...
Sheet feno feno ho any ...
Famoronana feno ...
Ny firafitra dia tsanganana gantr 4 ...
Milina vita amin'ny fitaratra ho an'ny Coil Rolling Coil ...
Karazan-tsipika vita. Mihatra ...
Nampiasa Scoth-Brite Roller ...
Ity milina ity dia fahita ...
Miorina amin'ny gantry fra ...
Ny rafitra dia misy: 2 pneu ...
Tamin'ny taona 2005 dia nanomboka namolavola, namorona ary nanangona milina famokarana fehikibo mivelatra ho an'ny metaly izahay. Miaraka amin'ny fanitarana mitohy amin'ny sehatry ny fandraharahana sy ny fanovana ny rafitry ny mpandray anjara, tamin'ny taona 2015 dia niorina Wuxi Zhongshuo Machinery Co., Ltd.
Ny orinasa dia ao amin'ny Wuxi City, Jiangsu Province. Ny renivohitra voasoratra anarana dia 8 tapitrisa RMB. Ny faritra fanamboarana dia mihoatra ny 7000 m2. Ny isan'ireo mpiasa dia mihoatra ny 60, anisan'izany ny injeniera 1 ambaratonga fikarohana, injeniera zokiolona 2 sy injeniera 5.